Meesha Baaskiilada Wasakhda Ah Agtayda Looga Raaco
Posted on Waxaa laga yaabaa 20, 2021 By riix
Mootooyinka ugu dheereeya ee 1000cc waxa ay caadiyan ku xaddidan yihiin 188 mph xajmigoodu, kaas oo ilaalinaya mishiinka gaadhiga isaga oo xaddidaya xawaarihiisa ugu badan. Si kastaba ha noqotee, haddii mootooyinkan xawaaraha sare leh ay yihiin
Sida Loo Helo Labada Baaskiil Oras
Sida loo helo labada baaskiil ee ORAS Fly to Route 119 oo u fuul Waterfall u dhow. U duul jidka 111 oo gal saxaraha adoo isticmaalaya Go-Goggles. U duul
Koofiyadaha baaskiilka: doorashada, cabbirka, ku habboonaanta
Posted on July 12, 2014 September 15, 2021 By riix	No Comments koofiyadda baaskiilka: doorashada, cabbirka, ku habboonaanta
Waxaad la kulantaa doorasho: iibso koofiyada ama u kaxee gabadh makhaayad qabow, koofiyaddee ayaad dooran doontaa? Waxaan iska dhigay su'aashan muddo dheer, laakiin ugu dambeyntii waa waqtigii laga hadli lahaa sida loo doorto koofiyada baaskiilka. Muwaadin masuul ah ahaan, waxaan iibsaday koofiyada koofiyadda isla markiiba ka dib markii aan iibsaday…
Read More "Koofiyadda baaskiilka: doorashada, cabbirka, ku habboonaanta" »